Tilmaamaha Safarka ee Alexandria Xalaal - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Alexandria waa magaalada labaad ee ugu weyn dalka Masar (3.5 milyan oo qof), dekeddeeda ugu weyn iyo daaqadda waddanka ee ku teedsan badda Mediterranean-ka.
Alexandria waa hooska yaraaday ee sharafteedii hore ee quruxda badnaa, laakiin wali waa u qalantaa booqashadeeda meelo badan oo soojiidasho dhaqameed ah iyo wali muuqaal muuqda oo la soo dhaafay.
Bibliotheca, Maktabada cusub ee Alexandria
In yar oo ka mid ah magaalooyinka adduunka ayaa leh taariikh qani ah sida tan Alexandria; magaalooyin kooban ayaa ka dhacay dhacdooyin badan oo taariikhi ah iyo halyeeyo. Waxaa aasaasay Alexander the Great (Iskander al-Akbar) sanadkii 331 BC, Alexandria waxay noqotay caasimada Greco-Roman Masar; xaaladdeeda sida toosh u ahaanshaha dhaqanka waxaa astaan ​​u ah Pharos, laydhka halyeeyga ah.
Muddo fog ayaa halkan ka jirtay tuulo kalluumeysi, oo loo yaqaan Rhakotis, laakiin Alexander wuxuu lahaa qorshooyin ka ballaaran. Qiimihiisa istiraatiijiyadeed wuxuu ahaa mid iska cad: waxay lahayd deked weyn oo dabiici ah, maraakiib taakulaynaysa si looga hortago weerar dhulka, dhul barwaaqo ah, iyo xakamaynta suurtagalka ah ee marinnada ganacsiga ee wabiga Niil iyo dhulka fog ee Badda Cas iyo Carabta. Laakiin habka loo wajahayo dekedda ayaa ahaa mid khiyaano leh: xeebta iyo jasiiradaha ka baxsan xeebta way hooseeyeen oo astaamo ma leh, sidaa darteed badmaaxyaashu waxay si fudud u qaadi karaan kanaalka qaldan oo ay ku burburaan kabaha. Si loogu hanuuniyo, dhaxalkii Alexander Ptolemy I & II wuxuu dhisay a lighthouse jasiiradda u dhow ee Pharos. Waxay taagnayd wax ka yar 100 m, markaa Kaliya Ahraamyada waaweyn ayaa ka dheeraa. Muraayad naxaas ah oo dusha sare ka muuqata waxay ka tarjumaysaa iftiinka qorraxda maalinti, habeenkiina ololka idaha adhiga saliidu ku qoysay. Waxay ahayd mid ka mid ah Toddoba layaab ee dunida hore, magaca jasiiradda "Pharos" ayaa u yimid in lagu dabaqo dhammaan laydhadhka soo socda, waxaana ka dhashay ereyo casri ah sida "waji" af Faransiis ah.
Diyaarad ka dheereysa 1 km oo dherer ah ayaa loo dhisay inay ku xirto Pharos ilaa dhul weynaha, iyadoo u kala qeybineysa gacanka dekedda bariga iyo galbeedka. Silt iyo qashin-qubka ayaa lagu dhisay hareeraha diyaaradda sidaa darteed wuxuu ku sii fiday jasiirad, degmada maanta ka jirta Anfushi. Laydhku si xun ayuu u waxyeeleeyay dhulgariirradii dhacay 956, 1303 iyo 1323, ka dibna wuxuu ku dhacay qashin iyo dayactir. Sannadkii 1480kii ayuu Suldaan Qaitbey isticmaalay dhagaxii burburay si uu uga dhisto qalcaddiisa halkan. Intiisa kale waxaa cunay nabaad-guur xeebeed, oo waxay u yimaadeen inay ku jiifaan sariirta badda. Laakiin isku dhafka sharraxaadyada qadiimiga ah, qadiimiga ah ee qadiimiga ah ee badda iyo sawir-gacmeedka dayax gacmeedka ayaa sawir faahfaahsan naga siinaya.
Alexandria ee hoos timaadda Ptolemy I & II waxay ku barwaaqowday oo keliya ganacsiga, laakiin waxay ahayd dhaqaale aqoon. Waxay u dhaqaaqeen inay helaan oo fahmaan qoraal kasta oo ay kari karayeen. Maraakiibta imanaya waa la baaray, qoraal walbana gacanta ayaa lagu dhigay oo lagu soo guuriyay papyrus. In weyn Maktabadda Alexandria Qoraallada waa la tarjumay, waxa lagu duubay oo la darsay. Aqoonyahannadii, falsafadihii iyo saynisyahannadii ayaa isugu soo xoomay inay ka shaqeeyaan qoraalladan, iyo inay abuuraan waxyaabo cusub. Kaliya hal tusaale oo ka mid ah wax soo saarkoodii hal-abuurnimo ayaa ahaa Septuagint, tarjumaadi Giriigga ee ugu horeysay ee qoraallada Cibraaniga ah ee noqday Kitaabka Quduuska ah ee Hore ee Masiixiga.
Ganacsiga iyo aqoonta ayaa ka dhigtay Alexandria cosmopolitan, oo leh dadka ugu badan ee Yuhuudda ah iyo dhaqamada Hellenistic-ka meel kasta. Waxay sii haysatay muhiimaddeeda, waxayna ahayd caasimaddii Masar, halka awoodii ay meelo kale u wareegeysay: soo bixitaankii iyo hoos u dhacii Rome, kororkii Byzantium, iyo koritaankii Beershiya. Laakiin magaaladu waxay la kulantay masiibooyin dabiici ah (tusaale tsunami ee 365 CE) iyo dagaallo taxane ah (gaar ahaan Rome), maktabaddiina waa la burburiyay. Markii Carabtu qabsadeen Masar 641 CE waxay aasaaseen caasimad cusub oo koonfurta ka xigta Fustat, hadda Qaahira. Siyaasad ahaan, xag dhaqaale iyo xag aqooneedba, Alexandria meesha dambe ma ahayn.
Alexandria waxay u badbaaday sidii deked ganacsi; Marco Polo wuxuu ku sifeeyay qiyaastii 1300 inay tahay mid ka mid ah labada dekadood ee adduunka ugu mashquulka badan, oo ay weheliso Quanzhou, si kastaba ha noqotee meesha istiraatiijiga ah ee ay ku taal waxay ka dhigan tahay in ciidan kasta oo u socda Masar ay sii maraan: Napoleon ciidamadiisii ​​ayaa ku soo duulay magaalada 1798, laakiin Ingiriisku wuxuu ka qabsaday gudaha Go'doominta Alexandria sanadkii 1801. Masaariyiintii uu xukumayey Maxamed Cali ayaa la wareegay magaalada oo dib u dhisay, laakiin Kacdoonkii Orabi ee 1881 iyo xasuuqii reer Yurub ee magaalada ka dhacay ayaa horseeday in Ingiriisku dib u weeraro oo dubbihii jabhadda ku dubto seddexdii maalmood Duqeyntii Alexandria, iyadoo in badan oo ka mid ah bartamaha magaalada laga dhigayo burburka.
Mar labaad, Alexandria waxay ka kacday dambaska. Nolosheeda cosmopolitan iyo decaded kahor iyo inta lagu gudajiray Dagaalki Labaad ee Aduunka waxay dhashay gabyaheeda ugu weyn, Constantine P. Cavafy, waxaana lagu qoray taariikhdii Laurence Durrell Quartet Alexandria iyo taxane shaqooyin ah EM Forster oo ay ka mid yihiin Alexandria: Taariikh iyo Hage (1922), oo dadka qaar ku sifeeyeen inuu yahay tilmaamihii safarka ee ugu fiicnaa ee abid la qoro.
Hase yeeshe adduunkan, sidoo kale, wuxuu qaaday dharbaaxo xun 1950s markii hoggaamiyihii cusbaa ee waddaniyiinta Masar Gamal Abdel Nasser uu qarameeyay qaybo badan oo dhaqaalaha ah kana mamnuucay shisheeyaha inay yeeshaan ama maamulaan shirkado, taasoo si wax ku ool ah ugu qasabtay tobanaan kun oo shisheeye ah inay dalka ka baxaan, oo ay ku jiraan ku dhowaad dhammaan Alexandria ee hal mar 150,000-bulshada Greek. Alexandria sidaas ayey ku joogsatay inay noqoto magaalo caalami ah.
Magaalada Alexandria ee maanta waa magaalo badeed badeed leh oo Masri ah oo leh meylal dhaadheer oo dhaadheer iyo 'qabqabasho ay ku noolyihiin dadkeedu 5 milyan, laakiin heerka ay ku leedahay dekedda hormuudka u ah Masar ayaa ka dhigaysa mid meherad ka dhigata, dalxiisayaashuna wali waxay ku soo qulqulaan xeebaha xilliyada xagaaga. In kasta oo in badan oo magaalada ah ay si xun ugu baahan yihiin dayactir weyn, taariikhdeeda wali way muuqataa: jardiinooyinka qaabka Faransiiska ah iyo calaamadaha waddooyinka ee xilliyada faransiiska ah waxay ku badbaadaan inay yihiin dhaxal ahaan Napoleon, maqaayadaha Griiga iyo makhaayadaha yaryar ee hadhayna wali wax fiican ayey qabtaan. ganacsi.
Alexandria waxay leedahay cimilo kulul oo lama degaan ah (BWh), laakiin waxaa si aad ah u saameeya neecaawda badda, xagaaga qorax kulul oo kulul iyo qabow dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah. Maalinti waxay noqon kartaa mid qoyan xagaaga, iyadoo heer kulka xagaaga uu celcelis ahaan yahay 31 ° C (88 ° F), laakiin fiidkii badanaa waa qabow iyo jawi, badanaa Corniche. Jiilaalku wuu qaboobi karaa, iyada oo maalinta maalintiisu sarreyso ay mar marka qaarkood hoos u dhacdo 12 ° C (53 ° F), oo ay mararka qaarkood da'ayaan roobna mararka qaarkood roobdhagaxyaale. Qoyaanku wuu sarreeyaa sanadka oo dhan. Waqtiga ugu wanaagsan ee la booqdo Alexandria waa guga (Maarso – Juun) iyo deyrta (Sebtember – Noofambar), maadaama ay tahay xilliga ugu mashquulka badan xagaaga, marka ay Masaarida u soo degaan si ay uga baxsadaan kuleylka daran ee Qaahira.
Alexandria macnaheedu waa heerkulka baddaJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Alexandria waa magaalo dhuuban oo dhaadheer, waxaa laga soo dhex qabtay wabiga laamiga iyo badda. Halbowlaha bariga-galbeed, Corniche, wuxuu soconayaa qiyaastii 30 km. Si kastaba ha noqotee, faa'iidada booqdaha ayaa ah in dhammaan gaadiidka lagu rakibo marinkan, marka waa inaadan sugin wax ka badan daqiiqad tagsi, bas ama microbus oo socda. Khadka taraamka wuxuu ku socdaa barbar isbarbar socda ama laba dhinaca gudaha ah.
Qeybta galbeed waxaa ku yaalo Qatadel ee Qaitbey, oo laga dhisay meel u dhow (iyo laga soo bilaabo) laydhkii hore ee burburay ama Pharos. Corniche wuxuu markaa xaaqaa hareeraha dekedda bari, iyadoo Anfushi carrabka dhulku ka dambeeyo, ilaa aagga hudheelka dhexe ee ku xeeran Saad Zaghloul; ka dib wuxuu u gudbayaa dhinaca bari ee dekedda ee diyaaradda ka soo horjeedda maktabadda cusub. Ku dhowaad dhammaan indhaha, iyo inta badan hoyga iyo maqaayadaha, waxay ku teedsan yihiin ciriirigan 5-6 km ama dhow. Laakiin dhanka bari iyo bari ayey u rogeysaa Corniche iyada oo loo marayo degmooyinka xeebta ku teedsan Rushdy, San Stefano iyo Mandarah Hoteelada dhiiga badan leh ee Montazah waa bar dhalaalaya markaa tat, burbs iyo dib-u-kobcinta xargaha ayaa dib loo bilaabayaa, ilaa Aboukir.
Hay'adda Dalxiiska Masar waxay xafiisyo ku leedahay Saldhigga Raml, Sacad Zaghlui Squ, ☎ +20 3 485 1556, Madaarka Nuza, +20 3 4250 526, +20 3 4250 527, Madaarka Borg El Arab, ☎ +20 3 4485119, Saldhigga Rakaabka Badda, ☎ +20 3 4803494, Saldhiga Tareenka ee Misr, ☎ +20 3 3925985 iyo Saldhigga Tareenka ee Sidi Gaber, ☎ +20 3 4263953.
Khariidada bartamaha Alexandria
Alexandria waxaa si fudud lagu tagi karaa diyaarad, tareen ama waddo.
Diyaarad ugu raac Alexandria
Dhammaan duulimaadyada aada Alexandria waxay isticmaalaan garoonka diyaaradaha Borg el Arab, oo 45 km koonfur-galbeed ka xiga magaalada. Waxaa jira duulimaadyo caalami ah oo toos ah maalin walba aada Istanbul, Sacuudi Carabiya iyo waddamada Khaliijka. Waxaa jira duulimaadyo dhowr ah maalintii aada Qaahira, taas oo aad ugu dhow in duulimaadku kaliya uu macno samaynayo haddii aad ku xirmayso duulimaad kale. Alexandria waxay leedahay duulimaadyo toos ah oo toos ah maalin kasta oo taga Luxor, Hurghada iyo Sharm el-Sheikh. Egyptair waa hawl wadeenka ugu weyn halkan.
Madaarka Borg el Arab. Madaar yar laakiin casri ah, oo ku filan tirada rakaabka hoose ee ay hadda gacanta ku hayso. Kafeega iyo nadiifinta musqulaha waana intaas oo dhan. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Dhamaan adeegyada basaska ee taga garoonka diyaaradaha Borg el Arab ee ka imanaya magaalada hoose (iyo toos uga imanaya Qaahira) waa la jaray. Waxaad ubaahantahay inaad taksi qaadatid, taas oo qaadan doonta saacad ilaa 90 daqiiqo oo kuxiran taraafikada: xisaabi ugu yaraan LE250 maadaama aysan tartan kula jirin gaadiidka dadweynaha (Oktoobar 2018).
Gegada diyaaradaha ee El Nouzha (8 km (5.0 mi) koonfur-bari magaalada.). Tani waxay ahaan jirtay garoon diyaaradeed oo weyn, laakiin waa la xiray si aan xad lahayn - iyadoo loo maleynayo inay dayactir tahay, laakiin wax shaqo ah ma socdaan. Suurtagal maaha in dib loo furo illaa baahida loo qabo duulimaadyada halkan si xagjir ah u hagaagto mooyee. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Tareen ku tag Alexandria
Tareenka ayaa ah habka ugu wanaagsan ee loogu safro magaalada-ilaa-magaalada inta u dhaxeysa Qaahira iyo Alex, iyadoo ilaa 30 adeeg loo adeegsado maalintii. Kuwa ugu fiican ayaa ah "Gaarka ah", socda aan joogsi lahayn oo qaadashada 2 hr 40 min; sida ugu fiican ayaa ah adeegyada “Express” oo qaata 3 saacadood. Tareenadan ayaa nadiif ah oo raaxo leh, hawo qaboojiye ah, oo ay ku jiraan cuntooyin fudud. Tikidhada hal-dhinac ee AC1 ayaa ku kacaya LE51 (Oktoobar 2018). Tareenada dheereeya waxaa mararka qaarkood sidoo kale loogu yeeraa Isbaanish, Faransiis ama Turbo sababo la xiriira duubitaankooda. Eeg "Masar # tareen ku dhex wareeg" sida loo iibsado tigidhada. Khadka tooska ah, kahor, toos uga socda shirkadda tareenka ee ENR, ayaa ugufiican.
Tareennada ka baxa Qaahira dhammaantood waxay ka baxaan Saldhigga Ramses. Magaalada Alex waxay yimaadaan magaalada hoose Saldhiga Misr, halkaas oo tagaasida iyo microbuses ay sugayaan, ama halkee 15 daqiiqo oo woqooyi ah ay kuu keenaysaa Corniche iyada oo loo marayo Nabi Daniel St. (Midda dambe waxaa ku jahwareersan suuqyada waddooyinka iyo xayiraadaha booliiska, sidaa darteed tagaasida waxay isticmaali doonaan isku midka Saad Zaghlool St.)
Laakiin marka tareenkaaga “aan joogsiga lahayn” yimaado, oo qof walbaaba soo baxo, weydii intaadan raacin. Waxaa laga yaabaa inaad si fiican u joogsatay 3 km bariga Saldhigga Sidi Gaber oo ku taal Abu Qir St oo ah madaxa Mushir Ahmad Ismail St. Kaliya halkan ka deg haddii aad u socoto degmada bari sida San Stefano. Haddii kale fadhiisin adag, dhowr daqiiqo gudahoodna tareenku wuu cabaadayaa oo istaagayaa Saldhigga Misr.
Tareenada ka yimaada Alex sidoo kale waxay aadaan Mersa Matruh iyo magaalooyinka delta. Kuwani waa tareenno "caadi ah" oo aan laga dalban karin khadka tooska ah, markaa ka iibso tigidhkaaga saldhigga. Tareennada qaar waxay toos ugu socdaan Luxor iyagoo sii maraya Qaahira, laakiin kuwani sidoo kale waa gaabis “tareenno” caadi ah, waxaadna ka fiicnaan doontaa qaadashada Gaaska ama Gawaarida oo aad ka beddelato Qaahira
Dhowr shirkadood oo basaska ah ayaa bixiya adeegga baska ee Alexandria iyagoo ku jooga qiime aad u jaban: LE20-35. Basasku waa kuwo qaboojiye leh waxayna ku yimaadaan iyagoo dhameystiran adeega trolley hostess. Shirkadaha waxaa ka mid ah Golden Arrow, West Delta, Super Jet, Pullman iyo El Gouna. Waqtiyada shaqadu way kala duwan yihiin shirkad kale, laakiin waxaa jira safarro u dhexeeya Qaahira iyo Alexandria ku dhowaad saacad kasta laga bilaabo subaxa hore ilaa saqda dhexe.
In kasta oo basasku ay yihiin kuwo si fiican raaxo u leh, muddada safarkaaga ee Qaahira ilaa Alexandria (iyo taa beddelkeeda) waxay ku xirnaan doontaa barta laga soo qaado / laga dego. Basaska badankood waxay ka baxaan Saldhigga Basaska Almaza ee Heliopolis waxayna istaagaan Midan Tahrir iyo Giza ka hor inta aysan ugu dambeyn u ambabixin Alexandria; haddii aad ka soo biirto Heliopolis filo safar 4-5 saac ah halkii aad ka heli lahayd celceliska 2-3.
Waxaa jira dhowr meelood oo basaska laga qaado / lagu dejiyo gudaha Alexandria. Kuwani caadi ahaan waa at at Gidid xarunta (marka laga reebo El Gouna, kaas oo isticmaala Siidii Gaber saldhigga) oo xoogaa ka fog magaalada Alexandria sidaa darteed waa inaysan ku kacin wax ka badan tareenka LE10, LE15 max. Ha kaxaysan taksi qof kasta oo kuugu soo dhowaada adiga oo ka baxsan baska. Lugee banaanka saldhigga oo tag halkaa tagsi haddii ay qasab tahay. Waxa kale oo jira bas ka socda Gidid ilaa Siidii Gaber, iyo ka Siidii Gaber inta badan magaalada waxaa heli kara bas yar ama taraam haddii aad rabto inaad lacag keydiso. Qiimaha basku wuxuu kugu socodsiin doonaa nus rodol.
Ugu safri baabuur magaalada Alexandria
Waxaa jira laba ikhtiyaar markaad ka safrayso Qaahira kuna socoto Alexandria baabuur. Isticmaalka labada wado midkood, safarku wuxuu qaataa qiyaastii 3 saacadood, iyadoo kuxiran xawaaraha iyo taraafikada ku xeeran.
The Wadada beeraha waxay leedahay xawaare xaddidan 90 km / saacaddii gawaarida gaarka loo leeyahay waxayna leedahay 4 haad jiho kasta. Tani waa waddada weyn, sidaa darteed way yara buuxsami kartaa. Sidoo kale waxay bixisaa marin loo helo Damnhour iyo Tanta.
The Wadada lamadegaanka waxay leedahay xawaare xaddidan 100 km / saacaddii ee baabuurta gaarka loo leeyahay waxayna leedahay 4 haad jiho kasta. Magaca oo run ah, kani wuxuu ka gudbaa lamadegaanka waana ku yar yahay waana dhakhso badan yahay. Dhowr kiilomitir kasta waxaa ku yaal maqaaxiyo.
Digniinta caadiga ah ee wadista baabuurta ee Masar waxay khuseysaa; fiiri Masar wixii faahfaahin ah.
Doonni ugu raac Alexandria
Alex weli waa deked weyn oo badeed, laakiin dhammaan adeegyada rakaabka caalamiga ah wali waa la yareeyay sababtoo ah qaska gobolka iyo luminta taraafikada dalxiiska. Weli way suurtagal tahay in la diyaariyo safarka xamuulka, laakiin tahriibayaal aad u tiro badan oo isku dayaya inay Yurub ka gaaraan Bariga Dhexe bartamaha iyagoo maraya sannadihii la soo dhaafay, waxay aad uga taxaddari doonaan inay ku qaadaan. Marka sharadkaaga ugufiican wuxuu noqon karaa inaad kahesho rafcaan saaxiib aad leedahay hudheel gaar loo leeyahay.
Maraakiibta dalxiiska ee 'Med Cruise liners' ayaa si dhif ah halkan u booqda maalmahan. Maraakiibta Niil waxay wali wacaan Alexandria, Qaahira iyo goobihii qadiimiga ahaa ee Masar ilaa Luxor iyo Aswan. Laakiin waxaas oo dhammi waa xirmooyin safarro dalxiisyo xirmo ah, oo aan loo heli karin inay ku qabsadaan sidii doonyo dhibic-ilaa-dhibic ah.
Sidee looga warwareegaa Alexandria
Alexandria waa a dheer magaalada; wax badan ayaad ka heli kartaa meel kasta adoo adeegsanaya gaadiidka maxaliga ah ee laga heli karo Corniche.
Tagaasida jaalaha iyo madow ee Alexandria waa hab wanaagsan oo loogu safro magaalada, iyo mid raqiis ah sidoo kale. Ka taxaddar in kasta oo: taksiilayaashu ay si isku mid ah u diidi doonaan inay isticmaalaan mitirrada (qiimayaasha aan la hagaajin sannadihii la soo dhaafay) darawallada ayaa jecel inay ka faa'iideystaan ​​dadka aan Aleksandariyaanka ahayn, sidaa darteed waxaa ugu wanaagsan in lagu heshiiyo qiimaha intaanad fuulayn. labadii dhibicood ee magaalada ka jira waa inay ka badan yihiin LE25. Haddii aad ku jirto safar maalinle ah Alexandria, taksi ka bax meel ka baxsan xarunta tareenka maalintaas oo ku bixi LE10-15 halkii boos. Tusaale ahaan, bixi qiyaastii LE50-60 haddii aad qorsheyneyso inaad ku aragto 5 meelood 3-4 saacadood, ama LE80-100 haddii aad qorsheyneyso inaad ku aragto 8-10 meelood 5-6 saacadood.
Si aad taksi u gasho, ku dul rux wadaha oo ku qayli magaca meesha aad ku socoto. Haddii darawalku ogolaado waxay dhigan doonaan wadada dhinaceeda sida ugu dhaqsaha badan. Tagaasida qaarkood way istaagi doonaan inay ku soo qaadaan xitaa haddii ay horeyba u haysteen qof rakaab ah, laakiin dalabyada noocan oo kale ah ayaa ugu fiican in la diido. Intaas waxaa sii dheer, marwalba dib u fiiri mar alla markii aad taksiga ka degto, ma jirto lambar aad wici karto haddii aad lumiso wax qiimo leh, oo aad ugu dhowaan karto fursad aad ku soo celiso
Wicitaan Degdeg ah Tagaasida waxaa lagu dalban karaa taleefan ahaan 19559 ama 0800-999-9999 (lacag la’aan). Kuwani way ka qiimo badan yihiin laakiin guud ahaan aad ayey ugafiican yihiin cabsida caadiga ah ee madow iyo dhalaalaya.
Daryeel wuxuu ka shaqeeyaa Alexandria (Oktoobar 2018).
Tareenka Magaalada (jaalle) iyo Taksi
Alexandria waxay leedahay firfircooni, gaabis laakiin aad u jaban taraamka nidaam soo jiray 1860-kii oo qayb u eg - waa kan ugu da'da weyn ee wali ka socda Afrika. Khariidadda marinku waa mid jahwareer leh oo isbeddel joogto ah, laakiin hal arrin ayaa joogto ah: shabakadda ayaa loo qaybiyay magaalada dhexdeeda Khadadka Ramleh (Tram el-Raml), oo adeegsada taraamyada buluug-iyo-kareemka ah oo socod magaalada oo dhan dhawr dib-u-soo-celinta badda ka fog dhinaca xaafadaha bari, iyo Khadadka Magaalada (Tram el-Madina), oo adeegsada trams huruud dhalaalaya oo socod galbeedka iyo koonfurta bartamaha Alex. Labaduba waxay ku kulmaan Saldhigga Raml (محطة الرمل Mahattat el-Raml), oo ku yaal wadnaha Alex. Guud ahaan, Khadadka Ramleh waa kuwo dhaqso badan inkasta oo ay da 'yar yihiin, maadaama ay leeyihiin fiditaanno fara badan oo heersare ah oo xaq u-helid aan kala go' lahayn; Khadadka Magaalada, si kastaba ha noqotee, waxay had iyo jeer ku xaniban yihiin taraafikada.
Labada sadarba, qiimaha guryaha lagu raaco waa LE1, oo laga soo iibsaday. Xusuusnow gaariga ugu horeeya (seddexdiiba) ee taraamka buluuga ah waxaa loogu talagalay dumarka oo kaliya. Khadadka ayaa soconaya illaa 1AM, 10-30 daqiiqo kasta ama wixii la mid ah.
Malaha adeegga ugu faa'iidada badan ee dalxiisayaashu waa jaallaha cagaaran ee # 25, oo ka bilaabma Raml Station ilaa Ras el-Tin iyo Fort Qait Bey. Waxa kale oo aad ku boodi kartaa taraam kasta oo buluug ah galbeed laga bilaabo baska Sidr Gabr / istaanka tareenka si aad u tagto Raml, laakiin taraamyada dhanka bari u baxa oo dhan kuma hakan.
Waxaa jira adeegyo kaladuwan oo basaska maxalliga ah oo si weyn u soo hagaagay dhowrkii sano ee la soo dhaafay, laakiin waxay ka wareeraan kuwa aan ku noolayn Alexandria in muddo ah. Marka laga reebo basaska magaalada, waxaad sidoo kale heli doontaa "basaska yaryar", oo ka shaqeeya hop-iyo-go. Waxay yihiin basas si fudud loo aqoonsan karo oo 14-qof ah, oo istaagi doona markaad ruxdo oo istaago meesha aad u baahan tahay inaad ka degto. Wadayaashu si dhif ah kuma hadlaan Ingiriisiga, markaa hubi inaad taqaan magaca Carabiga ah ee aad ku socoto ama aad hore u ogtahay halkaad ku joogsanayso. Wadooyinku badanaa waxay maraan jidadka waaweyn, iyadoo wadayaashu raacaan jidad caan ah. Waddooyinka waxaa lagu qoraa Carabi dhinacyada gaariga, laakiin xitaa haddii aad ku hadasho Carabi tani ma caawin karto; wadayaasha baabuurta ayaa mararka qaar badala wadiiqooyinka iyaga oo aan badalin astaamahooda, sikastaba ha noqotee hadii aad ku sugnaato Alexandria in mudo ah waxaad baran kartaa xoogaa farsamooyin ah oo ku saabsan calaamadaha gacanta ee dadka deegaanka ay u qorsheeyeen si ay u muujiyaan halka la doonayo. Safarka guud ahaan wuxuu ku kacayaa inta udhaxeysa LE0.50-1.50.
Tilmaamaha Aragtida Alexandria
Taallo taariikhi ah
Aragtida hore ee Qaitbay's Citadel
Citadel ee Qaitbay, Ras el-Tin (tram jaalle ah ama microbus ilaa Anfushi),. 9 AM-4PM. Dhig caarada Anfushi / Pharos promontory, adoo dib u fiirinaya dekedda bari iyo bartamaha magaalada Corniche. Waxaa dhistay Mameluke Sultan Abdul-Nasser Qa'it Bay sanadkii 1477 CE, iyadoo dib u baaskiil loogu sameeyay dhagaxii laydhkii burburay. Waxay isku dayday (guul kooban) inay ka difaacdo magaalada kuwa ku soo duulay, laga bilaabo saliibiyiinta ilaa Napoleon, waxayna ku jirtay adeegsiga militariga dabayaaqadii 1882, markii Ingiriisku duqeeyay.
Waxaa jira laba gelitaan iyo galitaan. Galbeed, oo ku wajahan habka aad u socoto mall Harbor, waa Matxafka Badda ee dhulka - tani waa dan yar. (Ururinta waxay ku sii socotaa dhisme ku yaal suuqa weyn.) Ku soo wareego dhinaca koonfureed ee u jeeda Corniche ee laga galo albaabka weyn ee laga galo Citadel. Waxaa jira barxad deyr leh ka dibna 4-dabaq ah. Citadel LE60 tanaasul joogto ah & LE30; Matxafka Badda LE10. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Mostafa Kamel Necropolis (Mustafe Kamel Qabuuraha / Qabriyada). Qabuuraha waxaa ku jira afar qabri oo laga soo bilaabo qarnigii labaad ee dhalashadii miilaadiga, kuwaas oo dhammaantood ku jira xaalad aad u wanaagsan isla markaana si qurux badan loo qurxiyey. Qabuuraha waxaa ku yaal magaca Mostafa Kamel, mid ka mid ah qarniyadii 20aad ee siyaasadda Masar halyeeyadii ugu waaweynaa. Isagu waa kii ku dhawaaqay weedha caanka ah: "Haddii aanan dhalan Masar, waxaan jeclaan lahaa inaan noqdo Masri." LE40, tanaasul LE20. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Maktabada Kom el-Shouqafa
Maktabada Kom el-Shouqafa, Degmada Carmouz, koonfurta Anfushi. Catacombs-yadaas waxaa laga yaabaa in loo qoondeeyey inay noqdaan hal qoys oo hodan ah, oo markii dambe la ballaariyay si loo qaado aaska kale ee caanka ah, laga bilaabo 2aad illaa 4aad ee C CE. Magaca "Kom el-Shouqafa" waxaa loola jeedaa "mound of shards" iyadoo dadku ay hadiyado u keenayaan meydadka halkaan oo ay ku jiraan weelal dhoobo ah, ka dibna ay burburiyeen meelihii bannaanaa ka hor inta aysan ku noqon guryahoodii. Waxay ka kooban yihiin dhisme heer-hoose ah oo laga yaabo inay u adeegto sidii masaajid madadaalo ah, jaranjaro qotodheer oo qoto dheer iyo saddex heer oo dhulka hoostiisa ah (kan ugu hooseeya ee hadda ay daadadku mariyeen biyaha dhulka hoostiisa) ee loogu talagalay cibaadada aaska iyo isjiidjiidka. Meeshan ayaa la ogaaday 1900 markii dhulku u fiday dameer hoostiisa.
Waxaa loo dhisay sidii gooni gooni ah (iyo ka sii weyn) catacomb, Hall of Caracalla wuxuu noqday mid isku xiran markii xabaashii firfircoonayd ee tuugada ahayd ay dhex mareen. Waxay u muuqataa inay ahayd goob lagu aaso fardaha boqortooyadii Roomaanka, maadaama lafaha farasku u badnaayeen. Maya, maahan dameerka.
Catacombs-ku waa mid xiiso u leh qorshahooda iyo qurxintiisa, maadaama aaskii ugu dambeeyay ee loo sameeyay loo badalay qaabab Griig iyo Roman ah. Laakiin haddii aad aragtay qolalka aaska ee si qurux badan loo qurxiyay agagaarka Luxor, kan ayaa ku xanuunsanaya isbarbardhig. LE80, tanaasul LE40. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Tiirka Pompey, Karmouz. Taallo taariikhi ah, tiirarkan granite-ka ah 25-mitir-sare ayaa la dhisay iyadoo lagu sharfayo Emperor Diocletian AD 297. Aagga xaddidan ee halka tiirarku taagan yahay ayaa sidoo kale leh burburin iyo farshaxanno kale sida Serapium oracle. Sidoo kale agaggan waa xarun aad u weyn oo laga adeegto dharka iyo alaabta guriga oo loo yaqaan "El-Saa3a," halkaas oo aad ka heli karto noocyo badan oo dhar ah ama dhar ah. LE80, ardayda LE40. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Kom el-Dikka (woqooyi woqooyi saldhiga tareenka),. Maalin kasta. "Kom el-Dikka" waxaa loola jeedaa "tuulmooyin burbursan": wax badan oo ku saabsan weynaantii Boqortooyada Roomaanka. Waqtiyadii Ptolemaic aaggan wuxuu ahaa Park of Pan, oo ah beer farxadeed oo ay ku hareereysan yihiin villa iyo musqulo. Waxyaabaha muhiimka ah ee la dhisay qarnigii 2aad ee CE waa Villa of the Shimbiraha, oo leh mosaics wanaagsan, iyo masraxa kaliya ee Masar ee Masar. Tani waxay leedahay 13 tiir oo wareeg ah oo ka samaysan marmar cad iyo cawl, oo leh kuraas ilaa 800 oo daawadayaal ah, qolalka hurdada iyo qaybo ka mid ah dabaqa mosaiciga ah. Qodistii ayaa sii socota, sanadkii 2010-kii waxaa la soo saaray macbadka loo yaqaan Ptolemaic.
Waad arki kartaa amphitheater-ka sifiican adiga oo maraya dariiqyada, laakiin waa inaad lacag bixisaa si aad gudaha u gasho si aad u aragto mosaics-ka iyo farshaxanada kale ee yaryar. LE80, tanaasul LE40. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Qasriga Montazah, El Montazah ,. Waxaa la dhisay 1892 kii Aabaaskii Labaad ee Masar Cabbaas Hilmi Pasha, oo ah khedive-ka ugu dambeeya ee Masar. Mid ka mid ah dhismayaasha qasriga, the Haramlek, hadda waxaa ku jira casino ku yaal dabaqa hoose iyo matxaf ka mid ah astaamaha boqortooyada ee heerarka sare, halka ay Salamlek waxaa loo beddelay hudheel qaali ah (see See). Qaybo ka mid ah jardiinooyinka ballaaran (in ka badan 80 ha / 200 hektar) ayaa u furan dadweynaha. Waxaa jira lacag laga soo galo beerta nasashada. LE25. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Qabriga Askariga aan la aqoon, Mansheya. Qabriga askariga aan la aqoon oo ku sharfaya millatarigiisa. Macnaheeda ka sokow waa goob muuqaal ah oo Roman-u eg oo u qalma sawir maalintii ama markii la ifiyo fiidkii. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Qasriga Ras el-Tin (Qasriga Madaxtooyada), Ras el-Tin (Kaliya galbeedka Anfushi ee promontery). Ka bogo banaanka laakiin hadda waxay ka mid tahay saldhigga badda oo uma furna booqdayaasha. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Matxafka Qaranka ee Alexandria, 110 Tariq el-Horreyya oo ku taal Laatiinka rubuc (Laatiinka Quarter 10 daqiiqo ayaa looga socdaa bariga Saad Zaghloul Street),. Maalin kasta 9 AM-4: 30PM. Matxaf yar yar laakiin nuugaya, si wanaagsan loo soo bandhigay oo leh in ka badan 1800 qaybo qadiimiga ah. Qeybta hoose waxaa loo hibeeyay waqtiyadii Prehistoric iyo Pharonic, dabaqa koowaad ilaa xilligii Graeco-Roman, dabaqa labaad ilaa Coptic iyo xilligii Islaamka. Gaar ahaan xiisaha leh waa farshaxanada la soo saaray intii lagu jiray qoditaankii dhowaa ee biyaha hoostooda: waxaa jira dareen daaqad cusub oo laga furayo taariikhda. LE100, ardayda LE50. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Matxafka Graeco-Roman, Rubuc Latin. Xidhan. Matxaf taariikhi ah oo leh uruurin ballaaran oo inta badan laga soo bilaabo qarnigii 3aad ee dhalashadii miilaadiyada illaa AD qarnigii 3aad ee AD, oo ku baahsan xilliyadii Ptolemaic iyo Roman. Xidhan xadidan; weydiimaha ku saabsan "cusbooneysiin" loo maleynayo inay la kulanto garbaha iyo indhaha kor u kaca. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Matxafka Farshaxanka, Moharram Bey ,. Badanaa sawirro casri ah iyo kuwa Orientalist ah (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Matxafka Dahabka Royal, Degmada Zizenia,. Qurxinta boqortooyada ee boqortooyadii Masar ee 1805 ilaa 1952. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Masaajidka Qaed Ibraahim, oo u dhaw saldhigga Ramleh
Masjidka El-Mursi Abul-Abbas, Anfoushi. Masjidka oo la dhisay 1775-kii ayaa Aljeeriya loo dhisay, waxaa laga dhisay xabaashii suufigii caanka ahaa ee qarnigii 13aad, Axmed Abu al-Cabbaas al-Mursi Darbiyada masaajidka waxaa lagu xardhay dhagax macmal ah, halka minaaradda, dhanka koonfureed, ay taagan tahay 73 m.
Masaajidka Attarine, Attarine. Waxaa loo dhisay sidii kaniisad loogu talagalay Saint Athanasius sanadkii 370 waxaana loo beddelay masaajid kadib qabsashadii muslimiinta ee Masar. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Bibliotheca Alexandrina, Shatby / Silsia (Ka soo gal Corniche ama waddo yar oo gadaal ka socota),. Su-Th 10 AM-7PM, F 2 PM-7PM, Sa duhur-4PM. Maktabad casri ah oo weyn iyo Xarunta cilmi -baarista ayaa laga dhisay goobta Maktabadda qadiimiga ah ee Alexandria. Bandhig cajiib ah qoraallada qadiimiga ah ee Bariga Dhexe. Waxaa ku jira afar meelood oo matxaf, meel bandhig, iyo meerayaal. Safarrada joogtada ah ee Ingiriisiga iyo luqadaha kale. Matxafka Qadiimiga ah (LE50 dheeraad ah, ka iibso tigidhada albaabka madxafka) ayaa si gaar ah ugu habboon in la soo booqdo oo laga helo waxyaalo badan oo farshaxan ah laga soo bilaabo xilligii Faaraan ilaa xilligii Islaamka. LE70 (qaangaar aan Masar ahayn), LE35 (tanaasulid)-ka iibso tigidhada xafiiska Dr. Abd Al Hamid Dayed St. oo ku wajahan jaamacadda. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Cornice. Corniche waa marin sharafeed 15-km socod ah (wharf, pier, iyo boardwalk) oo ay weheliso dekedda ay ku yaalliin maqaayadaha, suuqyada iyo meelaha taariikhiga ah
Maxaa laga sameeyaa Alexandria
Xeebta ku taal dhammaadka galbeed ee Corniche
Qorraxdu Xeebta Maa'moura ama Montazah Beach. Xilliga xagaaga waxaa xeebaha buux dhaafiya dalxiisayaal Masaari ah, kuraas caag ah iyo kuraas caag ah waxayna ku kici doontaa LE5 (2008) in la soo galo. Waqtigaan ciidda iyo biyahu waxay yeelan karaan xoogaa balaastik ah oo tuuraya oo dul sabeynaya. Meelaha qaarkood waxay kaa qaadaan LE20 waxayna kuu heli doontaa boos intaa ka badan.
Montazah Royal Gardens In kasta oo jardiinooyinku ay qayb ka yihiin in ka badan saddex boqol iyo konton acre oo ka tirsan guriga weyn ee boqortooyada ee loo yaqaanno Muntazah Palace, Montazah Royal Gardens waxay la wareegtaa in ka badan kalabar hantida. Montazah Royal Gardens waxay ku yaalliin xeebta sidoo kale, taas oo macnaheedu yahay marin u helka xeebaha quruxda badan iyo biyaha diirran ee Badda Mediterranean-ka ee u dhow. The Montazah Royal Gardens waa xoogaa yar oo gaar ah halka jardiinooyinka magaalada iyo meelaha caamka ah ay ka walwalsan yihiin maaddaama ay si adag u qurxan yihiin, oo ay si fiican u buuxsan yihiin kuraasyo iyo wabiyo ama barkado lagu dabaasho oo u furan dadweynaha inay ku raaxaystaan.
Sidoo kale Montazah, Isboortiga Biyaha ee Montazah, waxaad siisaa ciyaaro isboorti oo kala duwan, laga bilaabo biyo-gelinta illaa soo-kicinta, xitaa Mooska iyo Donuts.
Doon kiro ah oo tag doonnida Ras el-Tin.
Hayso waqti dheer soco by Corniche qurux badan oo ku ag yaal Badda Dhexe.
Garoonka Alexandria ama Haras El-Hedood Stadium, Lumumba Street ama Max (U sheeg tagsiile kasta oo Al-Istad ah wuuna ogaan doonaa halka uu ku geynayo. Hadday tahay ciyaar Haras El-Hedood ah markaa u sheeg tagsiilaha Istad El Max). Ka qaybgal ciyaar kubbadda cagta ah oo ka socota dalka Masar. Kooxaha Alexandria waa: El-Ittihad, El-Olympi, Haras El-Hedood, iyo Smouha. Kursigu wuu ka duwanaan karaa LE25-500 iyadoo kuxiran qeybta fadhiga. Waxaa jira 4 qaybood oo fadhiga ah: VIP, darajada 1aad, shahaadada 2aad, iyo darajada 3aad. Haddii aad tahay qof ajnabi ah, fadhiga qaybta VIP waxay ka fogaan doontaa dhibaataynta taageerayaasha adag. LE25-500.
Kasino Austria ee Masar -B CP W, The Casino Austria ee Masar waxay u furan tahay Ajaanibta kaliya. Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'El-Salamlek Palace Casino'. Ciyaaraha waxaa ka mid ah Blackjack, Roulette, Punto Banco, Machines Slot iyo Caribbean Poker Poker. Khamaarka Austria ee Masar wuxuu ku yaal El-Salamlek Palace Hotel ee Alexandria.
Filimka Al-Amirate -BW (Cinwaanka: Montazah Palace; +20 35-477999), Nagala raaxayso filimada ugu fiican ee casho lagu qaato jawi qurux badan oo xarrago iyo raaxo ku leh shineemo Al-Amirate. Shineemo waxay ku taalaa El-Salamlek Palace Hotel oo ku yaal Alexandria.
Royal Alexandria (Cinwaanka: Fouad Street, Downtown; 012 2275493/4), Masraxa Filimkan ee Alexandria waxaa iska leh isla dadka ka shaqeeya masraxyada Renaissance ee Qaahira. Waxaa jira seddex shaashad, oo leh dhawaq hareeraha ah iyo xulashooyinka oo dhan. Bandhigyada saqda dhexe waa maalinle.
Cineplex: Green Plaza Semouha. 10 shaashadood. Tigidhada LE25. Filimo 3D ah oo la heli karo
Magaalada qadiimiga ah ee Alexandria waxay leedahay cufnaanta ugu badan ee dukaamada buugaagta lagu iibiyo iyo buugaagta lagu iibiyo dunida carabta marka laga reebo Beirut. Daaweyn gaar ah ayaa ah safaf dhaadheer oo buugaagta laamiyada ku iibiya ee ku yaal Nabi Daniel Street, kana soo horjeedka Xarunta Dhaqanka Faransiiska Sidoo kale hoosta ka eeg “Iibso”.
Xarunta Buugga ee Alexandria, Ururka Masaarida Guud ee Masar, 49 Saad Zaghloul St. Telefoon: 482-2925. Buugaag ku qoran Ingiriis, Carabi, Faransiis iyo Jarmal iyo buugaag iskuul oo jaban.
Ramada Bazaar Bookshop, Ramada Renaissance Hotel. Telefoon: 549-0935. Furan maalin kasta 9AM illaa saqda dhexe.
Bibliotheca Alexandrina Bookshop, El Shatby. Furan maalin kasta 9AM illaa 7PM. Buug-gacmeedka ayaa ku lifaaqan maktabadda Waxay ku fiican tahay suugaanta guud iyo dalxiiska oo ku qoran luuqado kala duwan.
Diwan, El Shatby. Dhawaan ayaa la furay silsilad caan ah oo Masaari ah. Ingiriisiga iyo Carabiga oo dhameystiran, mala-awaal iyo malo-awaal. Kafeega.
Aleph, Wadada lamadegaanka Alex-Cairo, Le Marche Mall. Buug-gacmeed heer-2-buugeed ah, wuxuu ka kooban yahay dhammaan noocyada buugaagta Carabiga iyo luqadaha qalaad.
Naadiga Isboortiga ee Alexandria (midigta wadnaha Alexandria). Naadiga Isboortiga ee Alexandria oo la dhisay 1898 lana isticmaalay xilligii gumeysigii Ingiriiska, waa mid ka mid ah naadiyada ugu da'da weyn ciyaaraha ee Masar. Maanta, koorsada golf-ka waxay ku taagan tahay 97 feeddans, oo boqolkiiba 97 ay ka dhigan tahay wadarta naadiga. Waa koorso fidsan oo leh dukaanno khiyaano leh oo ay ku ciyaari karaan bilowga iyo sidoo kale khubaro. Naadiga sidoo kale waxaa ku yaal afar maqaaxiyo, Club House Restaurant oo ah kuwa ugu raaxada badan, iyo maqaayada 'Land Land' ee u adeegta carruurta. Waxay kaloo bixisaa cunnooyinka xafladda.
Naadiga Ciyaaraha ee Smouha, Smouha. Garoonka Xeegada Caalamiga, barkado fara badan oo lagu dabaasho, tiro garoonno kubbadda cagta ah, laba waddo oo socod ah. Xubnaha iyo martida kaliya.
Quusin Doonta leh Alexandra Dive, oo ku saleysan Corniche. Waa quusitaan taariikhi ah, sanadka oo dhan, xiiso leh laakiin si cad u qabow iyo calool xumo marka loo eego Badda Cas. Jaangooyada hal maalin, laba-quusin ayaa kuu qaadeysa “Palace of Cleopatra” oo lagusoo daadiyay jasiiradda Antirodos, iyo hareeraha dekeddii hore iyo haraaga laydhka ee ka haray barta Pharos. Waxay sidoo kale ku dhiiradaan burburin ka timid Giriiggii hore, xilligii Napoleonic, iyo Dagaalkii weynaa. Waxay bixiyaan koorsooyin tababar, laakiin kuwa bilowga ah wax badan ayey ka fiicnaan doonaan inay ku tababaraan Badda Cas. (Iyagu halkaas ayey safaro ku marayaan laakiin waxaad u socotaa si kastaba ha noqotee.) Dhammaan safarradan waxay ku tiirsan yihiin oo keliya cimilada, laakiin waxay leeyihiin lambarro wax lagu beddeli karo oo macquul ah.
Go dabaasha gudaha Naadiga Waddanka ama Dalxiisyada Lagoon, ee ka soo horjeedka Carrefour.
Go cayaar Xarunta Rezodanse - Masare (badhtamaha magaalada Alexandria, 15 Sezostris Street, horteeda Banque du Caire). Xaruntan dhaqanku waxay bixisaa fasalo joogto ah oo lagu ciyaaro Ballet, Flamenco, qoob -ka -ciyaarka Casriga ah iyo Qoob -ka -ciyaarka Masaarida. Waxa kale oo la heli karaa aqoon isweydaarsiyo gaar ah oo ay la leeyihiin macallimiin marti ah, iyo sidoo kale dhacdooyin dhaqameed waqtiyeysan (bandhigyo, saxiixyo buug). Xarunta Tamarin (Kafr Abdou Street, oo ku xigta Dukaanka la taaban karo) waxay bixisaa qoob ka ciyaarka iyo jimicsiga joogtada ah (Salsa, Tango, Aerobics, Fitness, Yoga, iwm). Labada Xarumoodba waxay bixiyaan hawlo ballaadhan oo ku habboon dadka waaweyn iyo carruurta.
Alexandria waxay leedahay qayb warshadeed oo aad u yar, inta badanna waxay kudhisan tahay warshadaha gaaska dabiiciga. In yar oo qurbajoog ah ayaa ka shaqeeya qeybtaan. Qaybtani way sii kordheysaa hadda maadaama warshado badan oo cusub laga dhex dhisay Borg el Carab.
Taas ka sokow, waxaa jira qaar laakiin aan badnayn iskuulo caalami ah oo ay ka shaqeeyaan macallimiin qurbaha ka yimid. Guud ahaan waxay bixiyaan wax kayar qaybta faa'iidada badan ee Qaahira.
Alexandria waxay heshay tiro aad u tiro badan oo iskuulo luuqadeed ah. Waxaad heli kartaa gabdho keliya, wiilal keliya iyo iskuullo isku dhafan. Sidoo kale shahaadooyinka caalamiga ah - sida IGCSE ama American SAT I iyo SAT II - ayaa lagu dhammaystiri karaa inta badan dugsiyadan. Intaa waxaa dheer, daraasadda waxaa lagu heli karaa Ingiriis, Faransiis iyo sidoo kale Jarmal.
Wax ka iibsiga Alexandria
Meelo badan ayaa umuuqda inay raacayaan saacadaha dukaamaysiga oo go'an. Jiilaal: Tu WF iyo Sa 9 AM-10PM, M iyo Th 9 AM-11AM. Inta lagu guda jiro bisha Ramadaan, saacaduhu way kala duwan yihiin, iyadoo dukaamada badanaa la xidho maalinta Axadda. Xagaaga: Tu W F-Su 9 AM-12: 30PM iyo 4 PM 12:30:XNUMX PM.
Degmooyinka ganacsiga, inta badan waxaa ku iibin doona hal shey ama nooc ka mid ah alaabooyinka ku urursan dariiqa; tusaale ahaan Nabi Danial wuxuu caan ku yahay iibinta buugaagta iyo kuwa iibiya qalabka korontada iyo qalabka elektaroonigga ah.
Buugaagta Buugaagta Caalamiga ah, 18 Abd el-Hamid el-Dib Street, Tharwat tram station (Ramleh Tram). Dukaan yar oo saaxiibtinimo yar oo saaxiibtinimo, haddii si waalli ah u adag in la helo. Waxay leedahay xul wanaagsan oo hufan oo buugaagta luuqadda Ingiriisiga ah haddii aad ku jirtid fasallo, iyo buugaag badan oo tixraac wanaagsan ah. Qurux ku filan buugaagta carruurta iyo akhrinta xeebta.
Dhismaha El Maaref, Saad Zaghloul St. Raml station (Yellow tram ama Taksi),.
Xarunta Buugga Alex, Semouha ,. Madbacad weyn iyo qaybiyaha barashada afka Ingiriiska iyo agabka manhajka dugsiga.
Nabi Daniel buugaagta iibiya, Nabi Daanyeel (waddo). Wadada Anabi Daniel dhexdeeda, kuwa buugaagta iibiya ayaa safaf dhaadheer ku iibinaya buugaag ku qoran Carabi, Ingiriis, Faransiis, iyo Jarmal iyo kuwa kale. Qiimaha waa gorgortan. Qiimaha lagu gorgortami karo.
Xarunta Magaalada Carrefour. Suuqa laga dukaameysto oo leh suuq weyn, dukaamo kafee iyo shineemo. Taksi qaado si aad halkan u timaado.
Mallge Mall. Dukaan yar oo heer sare ah oo kuyaala Carrefour hortiisa. Dukaamada dharka oo ay ku jiraan Adidas iyo warshadaha Timberland, oo lagu daray maqaaxiyo caan ah iyo makhaayado ay ka mid yihiin Chili iyo Pasadena Roof.
Deeb Mall, Roushdy. Ku diyaari suuqyada wax laga iibsado oo leh shaleemooyinka iyo maxkamadda cuntada.
Suuqa Mall. Midrange suuqa laga dukaameysto ee Gianaclis Station.
Plaza cagaaran (Hotel Hilton agtiisa). Suuqa weyn ee laga dukaameysto oo leh dukaanno badan, makhaayado, shineemooyin iyo maxkamad loogu talagalay cayaaraha fiidiyowyada iyo bowling.
Kirosez Mall, Mostafa Kamel. Meel dhexe oo laga dukaameysto.
Mina Mall, Ibrahimia. Meel kale oo laga dukaameysto.
Maamoura Plaza Mall, Maamoura. Makhaayadaha qaarkood.
San Stefano Grand Plaza Mall, San Stefano (Bariga Alexandria, oo ku xigta Hotel Afar Seasons. Weydiiso bas yar oo ku yaal Corniche "San Stefano".). Waxaa laga yaabaa inay tahay suuqa ugu weyn ee laga dukaameysto ee Alexandria. Dukaameysiga raaxada, 10 shaleemo, maxkamadda cuntada weyn.
Mowliidka Wataniyya, Sharawy St (Louran). Mall yar oo laga dukaameysto.
Suuqa Zahran, Smouha. Shineemo iyo makhaayadaha laga shaaheeyo.
Alexandria waxaa caan ku ah haysashada ugu fiican Makhaayadaha cuntada laga cuno dalka gudihiisa. Waxyaabo kale oo takhasus gaar ah u leh Alexandria oo mudan in la fiirsado:
Haddii aad rabto inaad raqiis ku cunto Alexandria, iskuday meelaha ay wax ku cunaan dadka deegaanka. Maskaxda ku hay in sababta oo ah kormeerka caafimaadka ee Masar uu dabacsan yahay, waa inaad ka taxaddartaa inta badan maqaayadahaas haddii nidaamkaaga difaaca aan loo isticmaalin Masar; si kastaba ha noqotee, haddii aad filayso inaad ku sii nagaato Masar wax ka badan laba toddobaad, waa inaanay wax dhibaato ah jirin.
Dukaanka Kawnka Tawn ((haa, Coffe)). Meel fiican oo ku taal Corniche, oo leh pizza hufan iyo kuraas hortooda laga qaxweeyo "loogu raaxeysto" taraafikada iyo muuqaalka. Qaxwada LE5-10, shukulaatada kulul LE15, pizza weyn LE30. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Gaad (Saldhigga Raml),. Takhasusay fuul (faashada fawaajada fava) iyo falafel. Waxaa laga heli karaa magaalada oo dhan, iyo runtii dalka; waa nooc ka mid ah Masaarida McDonald's.
Kushari Bondok, Smouha (supermarket-ka Fathalla agtiisa). Alexandria ee ugu caansan kushari wadajirka ah, oo u adeegaya saxankan masriga ah ee makarooniga ah, bariis, misir iyo suugo yaanyo ah.
Meto, 273 Gamal Abdel Nasser St,. Pizza iyo waxa u dhigma oo Carabi ah qaddar.
Makhaayadaha Kalluunka Shabaan, Shabaan, Al Mansheyah Al Kubra, Qesm Al Mansheyah, Alexandria,. Kalluunka badda 1kg kalluun oo loogu talagalay LE50-70.
Maxamed Axmed, Saldhigga Ramleh (Ka soo horjeedka hoteelka Metropole). Wadaag kale oo fuul / flafel caan ah. Tani waa meel aan la aqbali karin oo ku taal Alexandria. Fuul iyo falafel ayaa kafiican waxkasta oo aasaas kale ah oo Masar ah waana mid aad u macquul ah. Faa'iidada dheeraadka ah ee dalxiisayaashu u leedahay ayaa ah in maamulku uu si dhab ah ugu hoggaansamo shuruucda nadaafadda, oo ay yar tahay halista ah inuu ku soo boodo shuban-biyoodka socotada halkan (si ka duwan goobaha badan ee la midka ah). Cunno karis iyo dhaqan ahaan, waa inaan la seegin.
Hawda Gondol / Dongol, 3 Haret el-Gaami` (Azarita),. Makhaayada ku takhasusay cuntada badda ee nooca Alexandria ah. Kalluun la dubay oo la shiilay, shrimp, iyo suxuunta kale ee badda laga cuno ayaa la heli karaa, oo ay weheliyaan kofta haley (kubbado rooti qoto dheer lagu shiilay) iyo bariis cunno dhaqameed Masaari ah (bariis cad oo lagu kariyey basasha iyo basbaas bunni ah iyo dhir udgoon). LE30.
Jalaatada Alexandria waxay la mid tahay jalaatada sida caadiga ah loogu adeego jilicsan, laakiin waxaa lagu sifeeyaa inay tahay wax yar 'fidsan'. Waxaa lagu heli karaa dhadhan fara badan, sida ay qabaan dadka deegaanka, jalaatada noocan ah waxaa lagu sameeyaa oo kaliya Alexandria iyo Greece. Isku day meesha Bahary oo u dhow Qait Bey, halkaas oo dukaamada caanka ah ay ku jiraan Makram, El-Sheikh Wafik, Azza, iyo "El Se'eedy". Jalaatada waxay ku kici karaan LE1-5.
Galeyda xarkaha (dorra mashwey), oo laga heli karo iibiyaasha waddooyinka safafka Corniche.
Koshary, Cunnada qaranka Masar, waxaa laga yaabaa in laga helo maqaayadaha ku yaal magaalada oo dhan. Waxay isugu jirtaa baastada, bariiska, misirka iyo baastooyin badan oo lagu daro suugo yaanyo ah. Koshary ayaa lagu daray kibda Iskandarani—Beerka beerka u eg ee loo yaqaan 'Alexandria' oo leh basbaas — waa dhaqan maxalli ah.
Qiimo-dhex-dhexaad ah heerarka Masaarida, silsiladaha cuntooyinka degdegga ah ee reer galbeedka sida Pizza Hut, McDonald's iyo KFC dhammaantood waxaa laga heli karaa suuqyada waaweyn ee magaalada, laakiin waxaa jira fursado kale oo xiiso leh sidoo kale.
Abo Fares (Carrefour horteeda). Cunto macaan Siiriya.
Abuu Shakra, Smouha Green Plaza (iyo laamo kale),. Silsilad caan ah oo caan ah oo Masaarida ah oo ku takhasustay solayda deegaanka shwarma (LE10) oo gogol cuno kebab / kofta, shiilan iyo salad (LE25).
Elite, 43 Sofia Zaghoul ,. Mar alla markii ay jeclaayeen fikradaha indheer garadka Alexandria oo ay ku jiraan DH Lawrence, Laurence Durrell, iyo Edith Piaf, laakiin hadda waxay u egyihiin muuqaal u eg casho waddo Mareykan ah oo ku dhameystiran kuraasta vinyl-ka iyo miisaska caagga ah ee cadcad. Shaqaaluhu wali waxay ku hadlayaan Faransiis waxayna ku habboon yihiin nacasnimo. Isku day ah plat du jour.
Xusny, Gamal Abd El-Nasser St (El Mandara),. Cuntada Bariga Dhexe.
Pastroudis, 39, Wadada Al Horriya (Sall Raml) ,. 8 AM-1AM. Foornada oo leh dhinac dhinac ah macmacaanka iyo jalaatada.
Patisserie Delices, 46 Saad Zaghloul: hadda waa qayb ka mid ah La Veranda, ka eeg liistada hoose.
Tekka solay (Dekedda Bariga, oo ku xigta Naadiga Quusitaanka). Cunto macaan oo Masaari ah, oo leh aragtiyo ku saabsan dekedda iyo Fort Qait Bey. Isku day ah shish kebab iyo wara 'el enab (caleemo canab ah oo la buuxiyey).
Balba ' (Sidi Bishr, ama faras-magaalaha hore ee City Center Carrefour). Hilibka Masaarida iyo cuntada badda. Kaliya waxaa jira laba goobood oo Balbaa ah oo ku yaal Alexandria iyo waddanka oo dhan. Midka hore wuxuu ku yaal Sidi Bishr oo u dhow isgoyska Masaajidka Sidi Bishr iyo Waddooyinka Malak Hefny (oo ku xiga xarunta degmada Montaza iyo Sidi Bishr tareenka / Microbus station) kan labaadna wuxuu ku yaal aagga "Downtown" ee ku yaal duleedka magaalada magaalada. Dadku waxay u muuqdaan kuwo ka jecel kan "Downtown" wax badan, in kasta oo goobta Sidi Bishr ka sii weynaatay; labada gooboodba way wanaagsan yihiin, hase yeeshe. Waxaa lagu yiqiin hilib dhaqameedka Masaarida ee macaan iyo suxuunta digaaga iyo inta badan kofta; sidoo kale waxay ku dhex dabaalan jireen saxamada Khaliijka. Waxa kale oo ay leedahay qayb ka mid ah cuntada badda iyo maraqa cuntada badda laga helo waa uun wax la yaab leh. Qiyaastii LE100 qofkiiba.
In badan oo ka mid ah maqaayadaha ugu caansan Alexandria waxay ku yaalliin hudheeladooda.
Cafe Athineos, 21 Saad Zaghloul Sq (oo ku taal Corniche, oo u dhow Qunsuliyadda Talyaaniga),. "Mermaid of Alexandria" waa halyeey maxalli ah oo ay ku badan yihiin labada Durrell iyo Cavafy, laakiin hoog, waxay aad uga dhacday tan iyo maalmaheedii sharafta. Aragtiyadu wali waa layaab, oo ujeedooyinka Griigga ee ku jira jajabka jilicsan ee jilicsan iyo frescoes-ka loo yaqaan 'stenciled frescoes' waxay bixiyaan dabeecad kooban, laakiin cunnadu waa, in kasta oo magacyada Griigga ee ku yaal menu-ka, ku dhowaad gebi ahaanba la Carabeeyay: amar souvlaki waxaadna helaysaa kebab.
Gebal, 399 El Geish Road (In San Stefano Four Seasons Hotel),. 7PM - 1AM. Cunto fiican iyo adeeg aan iin lahayn. Worth ku faafay waayo-aragnimo ah cuntada Lubnaan tayo leh suxuunta mezze delicious. Waxay si fiican u haysaa khudradda. Liiska khamriga wanaagsan leh xulashada xaddidan ee khamriga galaaska. Goob wanaagsan oo ku taal dabaqa 3-aad ee loo eego Corniche; xitaa way fiicnaan doontaa marka xeebta dhammaato. Tilmaamida: aragti ballaadhan oo ku saabsan badda Mediterranean. Laga soo bilaabo LE250 qofkiiba.
Chez Gaby ama Ritrovo, 22 El Horreya St. (Saldhigga Rami agtiisa) ,. 9 PM-1AM. Waxaa macquul ah makhaayada talyaani ee ugufiican magaalada, oo u adeegta pizza iyo baastada ilaa 1979.
Makhaayada Qoyska, 544 El Geish Avenue (Renaissance Alexandria Hotel),. Furan 24 saacadood maalintii, iyada oo cashada la adeegsaday illaa 5 AM .. Makhaayada ugu sarreysa Shiinaha ee Alexandria.
Suuqa Kalluunka, Naadiga El Gomrok Scout,. Cunto aad u fiican, oo leh aragti weyn. Bass-bass waa liiska ugu sarreeya. LE250 qofkiiba.
Ibnu al-Balcad, Mustafa Kamel (Wuxuu ku yaal dhabarka dambe ee Tiyaatarka El-Salam). Makhaayad laba dabaq ah. Dabaqa koowaad wuxuu leeyahay hilib la dubay oo ay kujiraan caankoodii Ibnu al-Balad fattah. Dabaqa labaad wuxuu u adeegaa cuntada badda. Dhab ahaantii janno hilib jecel. LE50-150 qofkiiba.
La Veranda, 46 Sacad Zaghloul. (gudaha Patisserie Delices),. Badhtamaha magaalada, u dhow hudheelada Metropole, Cecil iyo Sofitel. Dhexdeeda, inta badan dabaqa waa makhaayadda-patisserie Jardin Delices. Qiyaastii rubuc ayaa ah makhaayadda La Veranda, oo leh cunno cunnadeed oo wanaagsan oo yurub / bari ah. Waxay u adeegtaa aalkolo. Hawada leh boodhadhkii hore, laakiin maalmahan ma ahan basaas ama duchess dillaacsan oo la helo. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Ole Cafe iyo Makhaayad, Kafr Abdou Street, Roushdy. Makhaayad qiime jaban oo u adeegta cunnada Isbaanishka, iyo keega macmacaanka. Isku day hilibka lo'da Madrid. Wi-fi bilaash ah LE50 qofkiiba.
Barkadda barkadda & solay, 399 El Geish Road (oo ku taal San Stefano Four Seasons Hotel),. 11:30 AM - 1AM. Makhaayaddan xilliyeed ee xilli-xilliyeedka ah waxaa ku hareereysan dhul-qurxoon oo qurux badan waxayna iska indhatiraysaa barkad aan dhammaad lahayn oo qurux badan. Ka dib quusin cusbooneysiis ah, udgoon cunto fudud adigoo ku nasanaya miisaska dalladda hadhka la leh. Ka dooro cunno fudud, sushi iyo sashimi, iyo sidoo kale cabbitaanno hal abuur leh. Makhaayadu waxay furan tahay xagaaga oo keliya. Kuraasta 76, oo leh 6 baarka. LE100 qofkiiba.
Stefano's, 399 El Geish Road (oo ku yaal San Stefano Four Seasons Hotel),. 7PM - 1AM. Makhaayaddan casriga ahi waxay u adeegtaa xulasho dhab ah oo laga heli karo Koonfurta Talyaaniga, oo ay ku jiraan takhasusyada badda. Jikada furan, qurxinta quruxda badan iyo soo dhaweynta diiran ee Talyaanigu waxay abuuraan jawi dhow. Kuraasta 60. Takhasusyada: Risotto iyo baastada cusub. Dharka Rasmiga ah ama Casriga ah. Malaha makhaayada ugufiican Alexandria. LE300 qofkiiba.
Makhaayada San Giovanni, 205 El Gueish Ave (San Giovanni Hotel),. Furan 24 saacadood maalintii, iyada oo casho la siinayo illaa 5 AM .. Isku darka West-East. Aragtida xeebta Stanley, muusikada caadiga ah ayaa si toos ah loo qaban jiray habeen kasta.
Fresca Café iyo Gelateria, 399 El Geish Road (oo ku taal San Stefano Four Seasons Hotel),. 11:30 AM - 3AM. Iyada oo leh quruxdeeda, qurxinta midabada leh, Fresca waa meel aan caadi aheyn oo lagu nasto, lagu nasto oo lagu raaxeysto cunto fudud. Kafeegaan waxaa laga fiirinayaa waddo mashquul badan oo magaalada ah iyo badweynta Mediterranean oo deggan. Keegag dibadda loo soo qaato iyo jalaato ayaa la heli karaa. Kuraasta 92 gudaha, 124 bannaanka. Isku day jalaatada halkan iyo sidoo kale lasagna. LE150 qofkiiba.
Sushi iwm, 399 El Geish Road (oo ku taal San Stefano Four Seasons Hotel),. 7PM - 1AM. Cunnada Koonfur-bari Aasiya. Ku habboon qado fudud, casho ama cunto fudud, Sushi iwm waxay bixisaa aragtiyo ku saabsan barkadda iyo Badda Dhexe. Kuraasta 66 LE200 qofkiiba.
Ottimo, Kafr Abdou 3 (oo ku xigta maqaayada Ole). Makhaayad fiican oo leh veranda
Makhaayada Caddaan iyo Buluug (Naadiga Griiga), oo ku yaal Suuqa Harbor ee ku dhow Qalit Fort. Naadiga Griiga (ENOA: Ellenika Nautikos Olimnos Alexandria) waa naadi gaar loo leeyahay laakiin leh laba makhaayadood oo dadweyne, iyo wax ka mid ah xarumaha Alex. Fuula wiishka ilaa maqaayada Olive Island ee dabaqa seddexaad: meeshu waa mugdi waxaana ku xardhan alaab duug ah. Marka dib ugu laabo dabaqa labaad oo leh makhaayad cad iyo buluug oo ku taal bannaanka, adoo fiirinaya dekedda bari. Dhawr ilbaxnimo sida “Kalispera sas” ayaa waddo dheer maraya maaddaama aysan si cad ugu hadlin afafka Griigga. Takhasusyada dhaqameed ee East Med sida kebabs, fuud, iyo kalluun badan. Nadiifi, oo aan qaali ku ahayn heerarka reer galbeedka. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
24 Todoba kafateer, Beerta Caalamiga (Carrefour horteeda). Caan ku ah dhalinyarada deegaanka ee soo bandhigaya qaababkoodii ugu dambeeyay. Cunto wanaagsan iyo shiisha.
Dukaanka Bunka ee Brazil, Saldhiga Raml (Wadada Sacad Zaghloul (Suuqa Hor Istaag)),. Dukaanka Bunka ee reer Brazil wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa hijrada weyn ee socdaalka ee ka dhacday Levant ilaa Latin America (horaantii qarnigii 20aad). Dukaankan kafeega ahi wali wuu ilaaliyaa gudaha 1920kiisii ​​asalka ahaa. Kafee waa mid aad qaali u ah, laakiin dhadhan fiican leh. Dhexdhexaad latte LE7.5. LE8.
Clay Kafe, 156 Omar Lotfy St. (Saldhigga Tareenka Yar ee Yar Yar). Wi-fi bilaash ah, inkasta oo ay tahay inaad iibsato ugu yaraan kafee calaamadeysan si aanad uga xanaaqin shaqaalaha. Cuntada iyo cabbitaanku badanaa waa reer Galbeed laakiin si macquul ah ayaa loogu qiimeeyaa socotada (sida caadiga ah LE15-25 cuntada, 5-15 cabitaannada). Smoothiesku gaar ahaan wuu fiican yahay.
Cafe Trianon, Saad Zaghlul square (xeebta agteeda) (Saldhiga Raml),. Makhaayada ugu caansan Alexandria, ayaa caan ku ahayd tan ugu wanaagsan om ali Masar - in kasta oo LE14 loo yaqaan waxa asal ahaan weel ka mid ah budada kalluunka macaan ay tahay mid aad u hooseeya. Cuntada sidoo kale waa wanaagsantahay oo waxyar ka macquulsan qiimaheeda, iskuday moussaka ee LE13.
Cafe De La Paix (Makhaayada Sayed Drweesh), Mohatet El Raml (Saldhiga Raml).
Naadiga21, Mo'askar Elroumany Street, Roushdy,. Maalin kasta 9AM ilaa 4AM. Meel fiican oo la booqdo, shaqaale saaxiibtinimo leh, cunto dhadhan fiican leh iyo cabitaanno leh celcelis ahaan qiimaha LE15 ee celceliska cuntada iyo LE8 ee cabitaannada. Shiisha waxaa laga heli karaa beerta meesha ku taal. Wifi bilaash ah.
Cumar El Khaiam Cafe, Mohatet El Raml (Saldhiga Raml).
Makhaayada Paris Cusub, Mohatet El Raml (Saldhiga Raml).
Macmacaanka Patisserie, 46 Saad Zaghlul Street (Raml Station),. Waxaa la dhisay 1922, Bakhaarka weyn ee Delices ee Ramleh Station ee Alexandria, Masar wuxuu noqday meel caan ah oo caan ku ah dhammaan dalxiisayaasha iyo dadka deegaanka ee raba inay la kulmaan quruxda xilligii Cosmopolitan. Bakhaarka wali waxaa maamula isla Qoyska ilaa 1922! Waxay caan ku tahay Cassata (jalaatada) iyo Griiga Baklava (oo lamid ah Maslax Baklawa laakiin ka dafey qorfe iyo malab)
Marka lagu daro xulashooyinka maxalliga ah, waxaa jira Starbucks ku yaal San Stefano Grand Plaza iyo Coffee Coffee oo u dhow Stanley Bridge.
Kuwa is-hoosaysiiya ah, Bixinta kafee, shaah iyo shiisha (tubbada biyaha) waa dhaqan Masaari ah waxaana jira waxyaabo badan oo laga helo Alexandria sidoo kale. Iskuday buufin, dib-u-ciyaar yar ama domino, oo fiirso adduunka oo maraya. Kuwani guud ahaan waa qayb lab ah, haweenkuna marar dhif ah ayaa lagu arki doonaa iyaga dhexdooda.
Xagee laga seexiyaa Alexandria
Hoyga Alexandria wuxuu leeyahay dareen ka duwan qaab dhismeedyadii hore oo mararka qaarkood lobbiyada qaabka gumeysiga u fiican. Waxaa jira xulasho wanaagsan oo hudheelo ah dhammaan noocyada qiimaha.
Muddo dheer oo bil ah ama ka badan, maxaad isugu dayi weyday inaad kireysato Alex? Guryuhu way fududahay in lagu yimaado, qiime kala duwan (LE180-1000 asbuucii) iyo gobolo dayactir ah! Milkiilayaasha guryaha / marwooyinku waxay ku noolaadaan isla hal dhismeyaal waxayna diyaar u yihiin inay hoos u dhigaan qiimaha. Xaqiiqdii waa u qalantaa inaad booqato guri kahor intaadan dhigin wax lacag ah, la doorbidayo galabtii markaa waxaad arkaysaa sida wanaagsan ee nalku u shaqeeyo iyo dhibaatooyinka ugu xun ee cayayaanka. (Aad ayey ugu yartahay in laga helo meel u dhow xeebta gabi ahaanba 'roach-free'!)
Badanaa daruuri maahan in horay loo sii qabsado khadka tooska ah, tani guud ahaan way ka qaalisan tahay. Kaliya iska hubi halka ay hudheelo badani ku yaalliin-ugu yaraan 7 ayaa ku dhow ama wax u dhow Hoteelka Triopmhe, halkaas oo aad ka geli karto oo aad weydiisan karto qiimo. Mid ayaa hubaal yeelan doona miisaaniyadda loo baahan yahay iyo heerka.
Hostel dhalinyarada ee Alexandria, 13 Sharia Port Said (1 km bariga Bibliotheca),. Ikhtiyaar miisaaniyadeed wanaagsan oo u dhow badda iyo Bibliotheca Alexandrina. LE58 gudaha sariir 4-sariirood ah. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hoteelka Triomphe,. Xulasho qumman oo leh olole cajiib ah. Qolalka waa nadiif yihiin laakiin sariiraha waxay u egyihiin wax yar sida isbitaalka. Musqusha waa nadiif oo waxay leedahay biyo diirran, laakiin qubeyska laguma kalsoonaan karo, marka waxaa laga yaabaa inaad ku dhegto tabka. WiFi qolka dhexdiisa kaliya. Hal ka LE150. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hoteelka Normandy, 8 Gamal el-Din Yassen (oo u dhow Saldhiga Raml),. Hoteelka Normandy waa qiimo wanaagsan oo lacag ah, laakiin xoogaa hoos ayuu u dhacayaa. Waa hudheel hal dabaq ah oo ku yaal Corniche, oo leh aragtiyo aan laga adkaan karin oo ku yaal Harbor-ka magaalada, waana dhismaha ka dambeeya hudheelka caanka ah ee Cecil, oo ku yaal dabaqa afraad. Qolalka waa kuwo si fiican loo magacaabay, waawayn oo nadiif ah, laakiin badbaado leh. Musqulaha ayaa ka hooseeya hoolka, sidoo kalena waa nadiif. Shaqaaluhu waa dad saaxiibtinimo badan, waxtar badan, oo daacad ah. Shaqaaluhu waxay ku hadlaan Ingiriisiga iyo Carabiga labadaba, aqoon yarna u leh dhowr luqadood oo kale oo aan kala sooc lahayn. Hal ka LE100. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hoteelka Union. Dabaqa shanaad ee saxda ah Corniche. Aragtiyo wanaagsan oo laga helayo hoolka. Qolalka waa caadi, laakiin musqusha si kastaba ha noqotee waa cusub oo raaxo leh. Haddii tani ay buuxdo, iskuday Triomphe, ama dhinaca kale. Hal ka LE150. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hotelka Nile Excelsior, 16 Borsa Kadema Street, Manshyia,. Jaban laakiin hudheel yar oo wasakh ah oo ku yaal magaalada hoose. Qolka kaliya ee ay kujiraan musqusha, A / C iyo quraacda waa € 12 / $ 20 sanadkii. Qolalka way ka nadiifsan karaan, laakiin waa ku filan yihiin marka la fiiriyo qiimaha miisaaniyadda. Quraacdu waa fududahay laakiin waa ku filan tahay. Shaqaale saaxiibtinimo leh oo waxtar leh. LE100.
Hoteelka Queen Transit Alexandria taleefan: 03-4815556, 21 Hasan El Shiekh Street, Mansheya, faras-magaalaha, dhinaceeda badda Corniche 1st Floor, oo ku taal bartamaha Alexandria, aragti aad u cusub oo nadiif ah oo badda ah: LE100 qolal keli ah, LE150 qol laba jibaar ah oo leh musqul + quraac + Wi-Fi.
Guri Soo dhawayn Cusub, agagaarka Hoteelka Metropole iyo Saldhigga Raml. Aad u liidasho ahaan loogu talagalay boorsooyinka xilliyeed ee xilli-ciyaareedka! Dhisme isku mid ah Hotel Normandy.
Huteel Fasax, 6 Orabi Sq ,. Hoteel aan laba-xiddigle lahayn oo leh musqulo gaar ah iyo biyo kulul, oo caan ku ah gawaarida xamuulka qaada ee dhulka hoostiisa mara kuna sii jeeda bartamaha Afrika. Meel aan ka fogeyn xeebta iyo masaafad u jirta bartamaha magaalada. Iska ilaali dhiqlaha.
Hoteelka Delta, 14 Champollion Street, Mazarita (Just at the Tram stop),, fax: + 20 3-4865630. Dhisme laami ah oo casri ah oo ka kooban 63 qol, qaarna badda ka eegaan. Aircon, telefishanka telefishanka. Meel aan ka fogeyn maktabada Alexandria. US $ 117.
Inta badan hudheelada ugu sareeya ee Alexandria waxay ku yaalliin xeebta bari, masaafo cadaalad ah oo ka fog xuduntii hore ee magaalada.
Qasriga El-Salamlek, Qasriga Montazah ,. Huteelkan oo ku yaal barxadda weyn ee Montazah Palace, hudheelkan waxaa loo dhisay sidii hoyga martida ee Khedive Abbas Helmi II sanadkii 1892. Hadda hudheel 5 xiddig leh iyo qamaar, goobtu hubaal waa qasan tahay laakiin, qiimaha qiimaha, adeegga waxay umuuqataa mid laga naxo. Goobta ku taal barxadda weyn, ee irridda leh ee ku taal cirifka bari ee magaalada, 10 kiiloomitirna u jirta bartamaha, sidoo kale waa mid aan ku habboonayn daawashada, laakiin haddii aad raadineyso nabad iyo xasillooni (had iyo jeer waa badeecad naadir ku ah Masar), tan waa meesha. US $ 400.
Afar xilli San Stefano, 399 El Geish Road,, fax: + 20 3-5818080. U jiheynta Mediterranean-ka ee soo jiidashada halyeeyga hal-abuurka leh, waxaad ogaataa xeel dheer oo ka dhexeysa dukaamaysiga Grand Plaza iyo dhismaha la deggan yahay. Ku raaxee hoyyo heer sare ah oo qurux badan, daweynta dalxiisyada yurubiyanka ah iyo makhaayadaha dabiiciga ah ee leh neecawda badda. Afar xilli ayaa ka fiican dhammaan waxyaabaha kale ee Alexandria ku yaal. Hudheelka ugu sarreeya ee Alexandria oo qiimahiisu u dhigmo. US $ 500.
Helnan Falastiin, Monteza. Huteelkan, oo ah kii ugu dambeeyay ee dib loo cusboonaysiiyay 2002, ayaa lagu dejiyay badda Mediterranean waxaana ku wareegsan 350 hektar oo jardiinooyin iyo xeebo leh. Waxay wajaheysaa Montaza Royal Palace, oo mar hoy u ahayd qoyska boqortooyada. 100 doolar.
Hilton Alexandria Green Plaza, 14ka May Buundada Wadada,, fax: + 20 3 4209140. Si rasmi ah kaliya hudheel saddex xiddig leh, laakiin aad uga fiican sida aad ka filan lahayd fasalkan. US $ 200.
Le Metropole, 52, Saad Zaghloul St. (oo u dhow saldhigga el-Raml),, fax: + 20 3-486-2040. Waxaa la furay 1902, kani waa mid ka mid ah labada hudheel ee waaweynaa ee Alexandria. Waxaa la siiyay dib-u-habeyn nus-qalbi leh, iyadoo wali ilaalinaysa qaabkii loo rogay qarnigii-qarniga. Waxay ku taal wadada weyn ee Alexandria, taas oo ku habboon indha indheynta, laakiin qolalka dabaqyada hoose (sida kuwa gadaal u jeeda) waxay noqon karaan kuwo buuq badan. Internetka waa la heli karaa laakiin dhibco ayuu noqon karaa.
Sheraton Montazah, Wadada Corniche,. Waxay ku taal cirifka fog (bari) ee Corniche. Yar, xishood badan una baahan dayactir.
Hoteelka Steigenberger Cecil, 16 Fagaaraha Sacad Zagloul ,. Hoteelka weyn ee Alexandria ee kale, qaar badan oo qolalkoodana loogu magac daray martida caanka ah sida Agatha Christie iyo Winston Churchill. Goob dhexe oo weyn, nadiif ah & raaxo leh, shaqaale waxtar leh. Wiishka qadiimiga ah ee wiishka qafisku wuxuu keenaa waqti soo jiidasho laakiin asal ahaan waa hudheel casri ah, in kasta oo alaabada qaarkood (tusaale musqusha) ay daalan yihiin. Cadeyn-dhawaaq wanaagsan, oo aad ku qaddarin doonto markaad siisid taraafikada Corniche iyo xafladaha aroosyada badan ee halkan lagu qabtay. Makhaayada Decent Jardin ee quraacda ah laakiin hoolka sare ee maqaayada Shiinaha ayaa laxiray. Adeeggu mararka qaarkood wuu gaabiyaa, internet la'aan. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Radisson Blu Hotel Alexandria, Alex West,, fax: + 20 3 5896020. Waxay ka soo horjeedaa biyaha ku yaal xaafadda Alex West ee badh laga tagay. Hoteelka ayaa aad uga fog magaalada weyn oo si xun loo dayactiray.
Nabdoonow oo iska ilaali khiyaanooyinka Alexandria
In kasta oo jariimadu dhif tahay gacan ka hadal, iska jir jeebadaha oo ha shidin waxyaabahaaga qaaliga ah ama ha xidhin shandad bum ama bakeeriga fannyka. Carruurta waddooyinka, darawallada tagaasida, iyo kuwa kale ayaa laga yaabaa inay dhibaateeyaan dalxiisayaasha. Badanaa way ka waantoobi doonaan dabadooda "La!" ama laba. Ama waxaad oran kartaa "la shukran!" (maya mahadsanid) ama "emshi" (go!).
Alexandria waa magaalo muxaafid ah, sidaa darteed haweenku waa inay daboolaan garbahooda, dhexda, kala-goynta iyo lugaha. Xitaa wali, haweenku waxay filan karaan in lagu xanto ama lagu dhibaateeyo dariiqa, badiyaa haddii ay keli socdaan. Jawaabta ugu fiican ayaa ah inaad iska indhatirto dambiilaha oo aad iska dhigto inaadan waxba maqlayn. Madaxaaga dabool marka aad galaysid goobaha cibaadada.
Lambarka Degdegga ah: 123
Lambarka booliska: 122
Nambarka Xarunta Dabka: 180
Khadka tooska ah ee booliska 16039 or 19039
Ambalaaska Dhexe, Kom El Dekka (kasoo horjeedka Saldhiga Alexandria),.
Isbitaalka El Moassa, Wadada Ceel Horreya., El Hadara ,.
Isbitaalka El Shatby, Dr. Hassan Sobhy St., El Shatby,.
Machadka Cilmi-baarista Caafimaadka, Wadada El Horreya. (isbitaalka Gamal Abdel Nasser agtiisa),.
Ambalaaska Bacos, Mehatet El Souk St., Bacos ,.
Isbitaalka Weyn ee Poison Center,.
Greece, 63, Alexander the Great Street, Chatby, Alexandria,, fax: + 20 3 4865896. 9 AM-4PM.
United States, 3 Fircoon Street, Azarita, Alexandria,, fax: + 20 3 4873811. Su-Th 8 AM-4:30 PM.
Xagee laga aadaa Alexandria
Abu Mena keniisad
Abuu Mena waa goob ay ku cibaadeystaan ​​masiixiyiinta masaafo dhan 45 km koonfur ka ah Alexandria, kuna qoran UNESCO Liiska Dhaxalka Adduunka.
El Alamein waa magaalo yar oo ku taal xeebta 120 km galbeedka Alexandria. 1942 xoogaggii Axis ee Rommel hoostiisa marayay waxay kufaadeen ilaa Liibiya ilaa Qaahira iyo Suweys. Waxaa halkaan ku joojiyay bishii Juun 1942 ciidamadii huwanta ee hoosta Auchinleck, waxaana dib u gurasho u diray Montgomery bishii Nofeembar. Magaalada waxay leedahay xusuusyo, matxafyo iyo qabuuro dagaal oo lagu xuso ummadaha oo dhan. Badanaa waxaa loo sameeyaa safar maalinle ah oo ka yimaada Alexandria.
Marina waa goob dalxiis oo xeebeed caan ah oo qiyaastii 100 kiilomitir u jirta Alexandria.
Qaahira waxaa loo samayn karaa safar maalinle ah, laakiin waxay u baahan tahay waqti dheeri ah, waxaadna u badan tahay inaad u gudubto jidkaaga ilaa Luxor, Aswan ama meelaha loo dalxiis tago ee Badda Cas.
Afarta xilli ee Hotel Alexandria ee ku yaal San Stefano
Golf Porto Marina Guryaha Adeegyada Alexandria
Hoteelka Hilton Alexandria Green Plaza
Hoteelka Le Metropole ee Alexandria
Dalxiisyada 'Porto Marina Resort & Spa Alexandria'
eHalal Safarka Mart > Safarka Masar Xalaal > Tilmaamaha Safarka Alexandria Xalaal
Hagaha Socdaalka Bonn Xalaal